Ntughari igwe na-enyocha okirikiri - China Re-okirikiri igwe na-enyocha ya, ,lọ ọrụ –Sffiltech
Home » ngwaahịa » Nyocha ikuku » Ngwongwo ntughari
Ntughari igwe eji agbaputa ozo
E kwere gị nkwa na ọ ga-adịgide
Ezigbo MERV 8 kwụsiri ike
Na-emezu iwu nrụpụta arụmọrụ ụlọ ọgwụ niile ebipụtara
Ngosipụta dị elu maka nchekwa dị n'ogo 1, 2 "ma ọ bụ 4".
Ngwa ntanetị: Ndị na-ebu ụzọ na-enyocha nzacha arụmọrụ dị elu, nzacha guzoro naanị maka ụlọ ụlọ, usoro nkewa, nkeji kwụ ọtọ na sistemụ ngwugwu na ndị na-ejikwa ikuku.
Arụmọrụ: Uru nke 8 maka MERV na MERV-A mgbe enyocha n'okpuru Asambodo Nlere nke ASHRAE 52.2.
Mgbasa ozi: ngwakọta nke owu na akwara eji eme ya na blanket midia.
Mbelata ikpeazụ nrụgide tụrụ aro: 1.0 "wg mgbe arụ ọrụ na 500 fpm. Imewe sistemụ nwere ike ịkọwa ebe mgbanwe mgbanwe ọzọ.
Okpomoku: okpomoku zuru oke nke 200º F (93 Celsius) ga.
Nhazi: uru ECI nke kpakpando ise, edepụtara ya dị ka UL 900.
Lee Akwukwo Akwukwo nke 1002 maka inwetakwu ihe .Pre-Flight: G2 ruo G4
Ihe nzacha na-atọ ụtọ
Aha Model klatara Ogologo ịdị elu ịdị omimi Airflow m3 / h Mgbagide ide Pa Media mpaghara m2 Unit nauyi kg Unit olu m3 24241 G4 594 594 23 2600 65 0,83 0,5 0,01 24242 G4 594 594 48 3420 70 1,64 0,78 , 0,02 24244 4 G594 594 98 4140 90 2,56 1,45 0,04 12242 4 G289 594 48 1710 70 0,79 0,4 0,01 16202 4 G394 495 48 1890 70 0,94 0,44 0,01 16252 4 G495 622 48 2340 70 1,18 0,55 0,02 20202 4 G495 495 48 2340 70 1,12 0,55 0,02 20242 4 G495 594 48 2880 70 1,36 0,66 0,02 20252, 4 495 G622 48 2970 70 1,42 0,7 0,02 12244 4 289 G592 98 2070 90 1,28 0,75 0,02 16204 4 394 G495 98 2250 90 1,45 0,85 0,02 20204 4 495 G495 98 2880 90 1,73 1,05 0,04 XNUMX XNUMX
Ngwa Uru: Nyocha mbu maka usoro ikuku ikuku. :Dị: Nnukwu arụmọrụ disposable pleated panel filter. Ikpe: kaadiboodu mmiri na-eguzogide mmiri. Media: Ngwakọta nke owu na akpo. Arụmọrụ EN779: 2012: G4. Nrụ ọrụ nke Gravimetric: 92%. Mbelata ikpeazụ nrụgide na-akwadoro: 250 Paụl: Agbara 70: C kachasị na ọrụ na-aga n'ihu. Ejidere friji: holọ na n'akụkụ ohere ịnweta oghere na okpokolo agba dị, 8dị 779, Ldị L, na Holọ FC. DWHD EN 201: 779 EN 2012: XNUMX D T KA ANY T NA-EBATARA • Kaadị kaadi na-eguzogide mmiri • Ngosi na igwe eji ekpuchi / ịgbanye ọnụ okporo • •riọkụ gafee ume maka ike njigide ngwa ngwa ma mee ka ikuku na-agbasa ozi site na mgbasa ozi.
Ngwa: nhicha nke mbụ maka sistemụ ikuku. :Dị: Nnukwu arụmọrụ disposable pleated panel filter. Ikpe: kaadiboodu mmiri na-eguzogide mmiri. Media: Ngwakọta nke owu na akpo. Arụmọrụ EN779: 2012: G4. Nrụ ọrụ nke Gravimetric: 92%. Mbelata ikpeazụ nrụgide na-akwadoro: 250 Paụl: Agbara 70: C kachasị na ọrụ na-aga n'ihu. Ejidere friji: holọ na n'akụkụ ohere ịnweta oghere na okpokolo agba dị, 8dị XNUMX, Ldị L, na Holọ FC.